Vaovao - fironana fampandrosoana Turbine Gegeratoy Wind
Andro vitsy lasa izay, consortium notarihin'ny goavambe indostrialy japoney Hitachi dia nahazo ny zon'ny tompona sy ny zon'ny asa fampitana herinaratra an'ny tetikasa 1.2GW Hornsea One, toeram-piompiana rivotra lehibe indrindra eto an-tany izay miasa ankehitriny.
Ilay consortium, antsoina hoe Diamond Transmission Partners, dia nandrombaka fanomezana nataon'ny Ofgem, mpandrindra ny herin'ny rivotra an-dranomasina britanika, ary nividy ny fananana fitaovam-pitaterana avy amin'ny mpamorona Wosch Energy, anisan'izany ny tobin-tsambo mpampisondrotra 3 an-dranomasina sy ny toby famokarana herinaratra any ivelany voalohany. Toerana fanonerana, ary nahazo ny zony hiasa mandritra ny 25 taona.
Ny toeram-piompiana fitsangatsanganana an-dranomasina any Hornsea One dia any amin'ny ranon'i Yorkshire, Angletera, miaraka amin'ny 50% amin'ny anjaran'ny Wosch sy Global Infrastructure Partners. Turbine 174 Siemens Gamesa 7MW miisa 174 no napetraka.
Ny fikolokoloana sy ny famindrana toerana fampitana dia rafitra tokana amin'ny herin'ny rivotra avy any ivelany any UK. Amin'ny ankapobeny, ny mpamorona dia manamboatra ny fitaovana fampitana. Aorian'ny fampiharana ny tetikasa dia tompon'andraikitra amin'ny fametrahana sy famindrana ny zon'ny tompona ary ny zon'ny mpamorona ny maso i Ofgem. Ofgem dia mifehy tanteraka ny fizotrany rehetra ary hiantoka fa manana fidiram-bola sahaza ny transferee
Ny tombony an'ity modely ity ho an'ny mpamorona dia:
Mora mifehy ny fivoaran'ny tetikasa amin'ny ankapobeny;
Mandritra ny fizotry ny famindrana ireo fotodrafitrasa OFTO, tsy ilaina ny mandoa ny foibem-pitaterana an-dranomasina handalo ny tambajotra;
Hatsarao ny fifanarahana faobe amin'ny fifanarahana tetikasa;
Fa misy ihany koa ny fatiantoka sasany:
Ny mpandraharaha dia miantoka ny vidim-piainana mialoha sy fanamboarana ary ara-bola an'ireo fotodrafitrasa OFTO;
Ny sandan'ny famindrana ireo fotodrafitrasa OFTO dia nodinihin'i Ofgem ihany, ka ahiana ny fandaniam-bola sasany (toy ny saram-pitantanana ny tetikasa sns.) Tsy ekena sy ekena.